Rockets nke ụlọ - Ikkaro
Anyị na-emeghe a ngalaba na-ekwu banyere ụwa ọhụrụ, nke nke arụrụ n'ụlọ roket.
Fgagharị Intanetị Ahụwo m ọtụtụ ụdị arụrụ n'ụlọ roket, ọtụtụ dị nnọọ mfe ma dị nkọ; rọketi eji eji mmiri na karama plastik mee ya na ndị ọzọ nwere ọkaibe ebe achọrọ teknụzụ ọzọ.
Anyị nwere ọtụtụ nhọrọ dị mfe, okike nke anyị ji akuziri ụmụaka. You chọrọ roket emere n'ụlọ maka ụmụaka? Na ihe nwekwara Ome si? Ma gịnị ka ha nwere ike ime (na nlekọta gị n'ezie? Ọfọn, echefula njikọ dị na ngalaba ahụ.
Na-achọ ihe ka njọ ... nke ọma, anyị nwererịrị mmiri rọketi. You ma na ha nwere ike iru 500 mita n'ịdị elu?
Enwere ogwe aka nke Mee N'onwe Gị nke enweghi ihe ọ bụla ị ga-ekwo maka otu nrụpụta ụlọ ọrụ. Anyị nwere ike ịchọta otu esi eme mmanụ ụgbọ rọketi. Isiokwu ndị na-atọ ụtọ n'ezie, n'agbanyeghị na a ga-akpachapụrụ ha anya n'ihi na ha nwere ike bụrụ isiokwu dị egwu.
M hụrụ n'anya na-atụba ihe site na ikuku na m hụrụ n'anya na-eme nzọụkwụ-site-nzọụkwụ Nkuzi.
Rockets bụ ngosipụta nke teknụzụ dị elu. Hụ oru ndị mmadụ na-amasị
Echere m na ọ bụ ezigbo ngalaba nwere ọtụtụ ihe inyocha ...
Mmanya mmanya na-aba n'anya
En ọwa youtube nke dealcohol, anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ nyocha ejiri mmanya na-aba n'anya.
Nke a dị mfe mmanya rọketi ọ dọtawo uche m. Na akara nke nnọọ mfe rọketi na-eme ka ndị dị otú ahụ dị ka egwuregwu rọketi ma ọ bụ onye maka tii akpa. Ihe ndị a bụ egwuregwu anyị na ụmụ anyị nwere ike igwu egwu, na-akọwara ha ihe egwu dị n’ọkụ na ime ihe dị mkpa. Emela ha ma ọ bụrụ na ị chere na ha ga-anwale ya mgbe naanị ha nọ ma ọ bụ na ndị enyi ha. Maara ụmụ gị karịa onye ọ bụla ọzọ .. Uru ọrụ a na-arụ bụ ịkpalite mmasi ahụ, ihe ahụ na-atọ ha ụtọ, nke na-eme ha ka ha chọọ ịnọgide na-amụ ihe ma na-anwale.
Oge a ka anyị ga-achọ
Mmanya na-ere ọkụ, ụdị ha na-ere na nnukwu ụlọ ahịa na-acha anụnụ anụnụ
a Mkpa ọkụ
A na-awụ mmanya na-aba n'anya n'ime karama ahụ ma na-atụfu ya. Mgbe ahụ, anyị na-etinye ya n'ọnọdụ ma weta ọkụ ọkụ na oghere dị na plọg ahụ. Ya mere ndị fọdụrụnụ, obere mmanya na-aba n'anya nke fọdụrụ n'ime mgbidi ga-agbanye ma gbanye karama ahụ.
Ana m ahapụrụ gị vidiyo ole na ole.
Rocket nwere akpa tii
Anyị nwere ike ịsị na ọ bụ roket dị mfe n ’ụwa. Chọrọ naanị akwụkwọ nke tii akpa ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Arụrụ ụlọ roket na ọkụ
Anyị na-aga ịhụ egwuregwu rọketi. Ndị a bụ ihe mgbatị dị mfe nke ejiri ... Nọgidenụ na-agụ ihe